Fraport jona 2021 tarehim-pifamoivoizana: mitohy ny fanarenana isa ny mpandeha
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Fraport jona 2021 tarehim-pifamoivoizana: mitohy ny fanarenana isa ny mpandeha
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Sambany hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana, ny seranam-piaramanidina Frankfurt indray dia nandray tsara mpandeha mihoatra ny 80,000 tao anatin'ny iray andro, noraketina an-tsoratra tamin'ny roa andro nitokana tamin'ny Jona 2021.
Seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) dia nanompo mpandeha 1.78 tapitrisa tamin'ny volana nitaterana.
Ny fitomboan'ny firoboroboan'ny fifamoivoizana amin'ny FRA dia mitohy na eo aza ny tsy fahampian'ny fahaiza-manaon'ny kibo omen'ny fiaramanidina mpandeha.
Ny seranam-piaramanidina Fraport Group manerantany dia nanoratra ihany koa ny fitomboan'ny fifamoivoizana tamin'ny Jona 2021.
Tamin'ny volana Jona 2021, nitohy nihatsara ny fifamoivoizana nataon'ny mpandeha, na teo aza ny fiatraikan'ny COVID-19. Seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) nanompo mpandeha 1.78 tapitrisa tamin'ny volana nitaterana. Io dia maneho fiakarana efa ho 200 isan-jato raha oharina amin'ny volana Jona 2020. Na izany aza, ity tarehimarika ity dia miorina amin'ny sanda farafahakeliny ambany voarakitra tamin'ny volana jona 2020, rehefa nihena ny fifamoivoizana tao anatin'ny tahan'ny aretina COVID-19.
Tamin'ny volana nitaterana, ny fihenan'ny tahan'ny tranga COVID-19 sy ny fanesorana bebe kokoa ny fameperana ny dia dia nitohy nisy fiatraikany tamin'ny fitakiana fifamoivoizana. Sambany hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana, ny seranam-piaramanidina Frankfurt indray dia nandray tsara mpandeha mihoatra ny 80,000 tao anatin'ny iray andro, noraketina an-tsoratra tamin'ny roa andro nitokana tamin'ny Jona 2021.
Raha ampitahaina amin'ny pre-pandemiatika Jona 2019, ny FRA dia nanoratra fihenan'ny mpandeha 73.0 isan-jato tamin'ny volana nitaterana. Nandritra ny tapany voalohany tamin'ny 2021, dia nahatratra mpandeha 6.5 ​​tapitrisa ny FRA. Raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana enim-bolana mitovy amin'ny 2020 sy 2019, ity dia maneho fihenan'ny 46.6 isan-jato ary 80.7 isan-jato.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny firoboroboan'ny fivezivezena entana ao amin'ny FRA dia nitohy na dia teo aza ny tsy fahampian'ny fahaiza-manaon'ny kibo izay nomen'ny fiaramanidina mpandeha. Tamin'ny volana Jona 2021, ny famoahana entana (misy ny zotram-piaramanidina sy ny fandefasana fiaramanidina) dia nitombo 30.6 isan-jato isan-taona hatramin'ny 190,131 metric taonina - ny boky faharoa avo indrindra voarakitra tao anatin'ny volana Jona tao amin'ny FRA. Raha oharina tamin'ny volana jona 2019, ny entana dia 9.0 isan-jato. Ity fitomboana matanjaka ity dia manasongadina ny toeran'ny Seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny maha foibe fitaterana an'habakabaka an-tampon'ny fiaramanidina an'i Eropa. Ny hetsiky ny fiaramanidina dia nihanika 114 isan-jato mahery isan-taona ka hatramin'ny 20,010 niainga sy niantsona. Ny lanjan'ny fihenam-bidy farany ambony (MTOW) dia nitombo tamin'ny 78.9 isan-jato ka hatramin'ny 1.36 tapitrisa metric taonina tamin'ny Jona 2021.
Ny seranam-piaramanidin'ny Fraport Group manerantany dia nahitana fitomboan'ny fifamoivoizana hita ihany tamin'ny volana Jona 2021. Tamin'ny seranam-piaramanidina sasany dia nitombo an-jatony isan-jato ny fifamoivoizana - na dia niorina tamin'ny fihenan'ny fifamoivoizana aza tamin'ny volana Jona 2020. Isan'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina rehetra ao amin'ny portfolio iraisam-pirenena Fraport dia mbola ambany lavitra noho ny ambaratongam-piraisana tamin'ny Jona 2019.
ny Slovenia Seranam-piaramanidina Ljubljana (LJU) niarahaba mpandeha 27,953 608,088 tamin'ny volana nitatitra. Tao amin'ny seranam-piaramanidina Breziliana ao Fortaleza (FOR) sy Porto Alegre (POA), tafakatra 806,617 ny mpandeha. Tao an-drenivohitr'i Peroa, ny seranam-piaramanidina Lima (LIM) dia nandray olona 2021 tamin'ny volana Jona XNUMX.
Ny seranam-piaramanidina rezionaly grika 14 dia nanompo mpandeha manodidina ny 1.5 tapitrisa tamin'ny volana Jona 2021. Tao amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Mainty Bulgaria, ny isan'ny fifamoivoizana ho an'ny seranam-piaramanidina Twin Star an'ny Burgas (BOJ) sy Varna (VAR) dia nahatratra 158,306 ny mpandeha. Tao amin'ny Riviera Tiorka, seranam-piaramanidina Antalya (AYT) no nahitana fitomboan'ny fifamoivoizana nahatratra 1.7 tapitrisa ny mpandeha. Ny volan'ny mpandeha tao amin'ny seranam-piaramanidina Pulkovo (LED) St. Petersburg any Russia dia nandroso hatrany amin'ny 1.9 tapitrisa. Any Chine, ny seranam-piaramanidina Xi'an (XIY) dia nanoratra fividianana fifamoivoizana 31.8 isan-taona isan-taona tamin'ny mpandeha 3.5 tapitrisa.
Raha fintinina, ny AYT sy ny seranam-piaramanidina Greek dia nahazo mpandeha betsaka toy ny seranam-piaramanidina FRA natokana ho an'ny volana Jona 2021, raha indroa kosa ny mpandeha nandeha namaky ny XIY. Mampiseho ny fahombiazan'ny portfolio'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fraport.